समाचारको प्रभावः नेपाल–जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबले दुई अपाड्ड बालबालिकाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दियो | PBM News.com
समाचारको प्रभावः नेपाल–जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबले दुई अपाड्ड बालबालिकाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दियो
कालिका २९ असार । कालिका नगरपालिकाको वडा नं.३ का दुईजना अपाङ बालबालिकालाई नेपाल जापान फ्रेन्डसिप लायन्स क्लबले आर्थिक सहयोग गरेको छ । जारी लक डाउनको अवधिमा पत्रकार सन्तकुमार चौधरीले वडा न. ३ मा ११ वर्षकी बालिकालाई अभिभावकले डोरी बाँधेर रेखदेख गर्ने गर्र्दै आएको समाचार लेखेपछि जापानमा रहेका स्थानीय सुरज बनले ति बालिकाको बारेमा चासो देखाएका थिए ।
स्थानीय बासुदेव रेग्मीकी ११ वर्षकी छोरी ( सुवास्ना ) मानसिक विरामी छिन् । के गर्न हुन्छ के गर्नुहुँदैन भन्ने हेक्का नभएकी छोरी घर छाडेर हिड्ने गरेका कारण डोरीले बाँधेर राखेको पाँचवर्ष भयो । यता सुवास्नाको बुबा बासुदेव पनि प्रेसरले हानेर अपाड्ड छन् । आर्थिक अभावले उपचार गर्न नसकेको समाचार सार्वजनिक भएपछि जापानमा बस्दै आएको सुरज बनले सुवास्नाको परिवारको लागि आर्थिक संकलन गर्न थाले । उनले नेपाल – जापान प्रेन्डसिप लायन्स क्लब मार्फत केहि आर्थिक संकलन पठाउने योजना बनायो ।
क्बले लायन्स क्बल अफ कालिका पदमपुरको रोहबरमा उक्त रकम सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न स्थानीय आर्दश टोल विकास संस्थालाई भनेको थियो । टोल विकास संस्थाले बासुदेव रेग्मीको छोरी जस्तै टोलमा अर्का एकजना बालक पनि शारीरिक अपाड्ड भएको क्लबलाई जानकारी गरायो । क्लबले अर्को अपाङ बालक बसन्त बोटको परिवारलाई पनि केहि आर्थिक सहयोग गर्ने गरी पुन आर्थिक सहयोग संकलन गरेर ७० हजार रुपैयाँ पठायो ।
क्लबले पठाएको रकम स्थानीय आर्दश टोल विकास संस्थाले एक कार्यक्रमको नै आयोजना गरेर स्थानीय परदेशी बोटेको छोरा र बासुदेव रेग्मीको छोरीको परिवारलाई सो रकम हस्तान्तरण गरे । बासुदेव रेग्मीको छोरीलाई ४० हजार रुपैयाँ र प्रदेशी बोटको छोरालाई उपचार खर्च भनेर ३० हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष टिकाराज रिजालले दुवै अपाड्ड बालबालिकाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेर मानवियता देखाएको भन्दै सहयोगगर्ने क्लबलाई हार्दिक धन्यवाद दिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका वडा अध्यक्ष रिजालले सामाजिक संजाल र समाचारको महत्व बुझ्न सके यसले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए । जापानमा रहेर पनि आफ्नो मातृभूमीमा बस्ने दिनदुखीहरुका लागि पठाएको सहयोगले समाज रुपान्तरणमा ठूलो अर्थ राख्ने भन्दै सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिए ।
कार्यक्रममा लायन्स क्लब रिजन प्रमुख भीष्म खनालले यस्ता खालका रचनात्मक कामको अरुले पनि सिको गर्नुपर्ने बताए । रिजन प्रमुख खनालले यस्तै खालको मानविय सहयोग र रचात्मक कामका लागि संसारभर लायन्स क्लबहरु स्थापना हुँदे गएको बताए । उनले लायन्स क्लब कालिका पदमपुरले पनि विभिन्न खालको सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा लायन्स क्बल कालिका पदमपुरका अध्यक्ष डा. हरिप्रसाद कंडेलले पत्रकार सन्तकुमार चौधरीको न्यूजले सबैको ध्यान केन्द्रीत गरेको बताए । यो रकमले यि बालबालिकाहरुको उपचारमा कोसेढुंगा सावित हुने बताए । यस्ताखालको कामले सामाजिक संस्कार जर्गेना गर्न सहयोग पुग्ने बताए । विदेशमा बसेर आफ्नो गाँसकाटेर मातृभूमिमा देखिएको समस्यालाई सामाधान गर्ने पठाएको सहयोगले अरु धेरै युवाहरुलाई समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको पाठ पढाइरहेको बताए ।
टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा लायन्स क्लब रिजन प्रमुख भीष्म खनाल, लायन्स क्लब कालिका पदमपुरका अध्यक्ष डा. हरिप्रसाद कंडेल, नेपाल – जापान फ्रेन्ससिप लायन्स क्लबका नेपाल कोडिनेटर दिलिप लामिछाने, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य दिवस पाण्डे, नेकपा वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी, नेपाली काँग्रेस वडा प्रतिनिधि तुलसी चौधरी, नेपाल – जापान प्रेन्डसिप लायन्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष ज्योतिक केसी लगायतले बोलेका थिए । क्बलका पूर्व अध्यक्ष केसीले भर्चुअल ( अनलाईन ) मार्फत नै मन्तव्य राखेका थिए ।
भिडियोको अन्तिम तिर बासुदेव रेग्मी र उनको छोरी सुवास्नाको अवस्था देख्न सकिन्छ । भिडियो पुरै हेर्नुहोला । राहत वितरणको भिडियो भने भोली मात्रै सार्वजनिक गर्नेछौं ।
नाग्म पहिरोमा १० जनाको मृत्यु
पाटन अस्पतालमा उपचाररत दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन
भारतद्वारा नेपाली सेनालाई १० वटा आइसीयु भेन्टिलेटर उपहार स्वरुप प्रदान
कार दुर्घटनामा पत्रकार पाण्डेको मृत्युु
राप्तीको कोरोना खर्च विवरण सार्वजनिक ,८९ लाख ४३ हजार खर्च भएको दावी
बैतडीमा पहिरोले पुरिँदा आमाछोराको मृत्यु
मोदीले दिए कडा जवाफ फर्काउने चेतावनी
सलहको ठूलो झुन्ड नेपालमा छिर्ने सक्ने सम्भावना